Wepamusoro 10 Unofanira Kuva Ne iPhone Photo Apps | Martech Zone
Ini handisi mukuru wemifananidzo uye kumhanya nehunyanzvi kamera iri pamusoro pemusoro wangu, saka ndinobiridzira zvishoma ndichishandisa yangu iPhone uye zvimwe zvandinoda kunyorera. Kubva pane chikamu chekushambadzira, kupa mufananidzo wakanangana nebasa ratiri kuita, nzvimbo dzatiri kushanyira, uye hupenyu hwatiri kurarama hunowedzera mwero wekujekesa unofarirwa nevatengi vedu nevateveri.
Kuti ubatanidze nenharaunda yedu, mapikicha ave akakosha. Ini ndinokurudzira kambani yega yega kuti vashandi vayo vagovane! Heano kuputsika kweangu andinofarira iPhone kunyorera.
Hongu, ndinoziva kuti kamera inouya neIOS asi sarudzo yekutora panoramic mufananidzo inoshamisa. Kuti utore panoramic foto, tinya bhatani rezvisarudzo kana kamera yako yakavhurwa. Uyu mufananidzo ndakatora kukonsati yandakaenda nguva pfupi yadarika.
Hapana imwe application application inoita kuti zvive nyore kwazvo kugovana mifananidzo munharaunda. Ini ndinoda kuti ndinogona kusundira pikicha yakanangana neTwitter, Facebook uye Makona mana zvakananga kubva pa Instagram pane kuvhima nekutsvaga mafoto nemamwe maapp. Iyo yakavakirwa mukugona kuisa mafirita uye mabhureki anogona kukuita iwe kuti utaridzike sepro pro!
Kune zvimwe zvinhu izvo kamera yekutanga isingatenderi izvo zvinonakidza, sekuwedzera timer uye kutora pikicha. Kamera + ine zvishandiso zvinoshamisa zvekukubatsira kusefa, kutarisisa uye kuwedzera kujekesa kumifananidzo yauri kutora, pamwe nekugona kuzvitwasanudza. Iyo pro zvishandiso zvakavakirwa amateur!
Grid Lens inokutendera iwe kutora kuunganidzwa kwemifananidzo uye kuiisa pamwechete mune imwechete mufananidzo. Iwe unogona kusarudza uye kugadzirisa dhizaini, wobva watora imwe yemifananidzo nekudzvanya ipapo, uyezve chengeta, govera kana kutumira email chigadzirwa chapera. Izvi zvinoita kugovana muunganidzwa mudiki nyore uye nyore!
ColourSplash inokutendera kuti ubvise ruvara kubva muzvikamu zvemufananidzo wawakatora. Iyo Anwendung iri nyore zvinoshamisa kushandisa - ingo wedzera iwo mufananidzo uye dhonza chigunwe chako uko iwe kwaunoda kupukuta iro vara. Mufananidzo wakapedzwa unogona kunyatso tarisa kushamisa - uyu mumwe wemwanakomana wangu nemusikana wake vachitamba.
Wakambove nemufananidzo wakakumbira chinyorwa? Ndozviripo pamusoro pe… kupa vhiri rinotonhorera rekufambisa iro rinokutendera kuti uwedzere chinyorwa chinoshamisira kumufananidzo wako mumaminetsi.
Snapseed inopa mamwe mafirita anonakidza uye akajairwa ekugadzirisa maturu emufananidzo wako. Iwo maganhuriro ekugumira anoyevedza uye kushandiswa kwacho kwakanaka kuvandudza.
Blender inoita zvazvinotaura… ichibvumira kugona kusanganisa mifananidzo yakawanda pamwechete. Heano musanganiswa weChicago… uchityaira uchipinda muguta uye uchitarisa pasi kwariri.
Yakakurudzirwa na Nat Finn, Ini handina kana kuziva kuti Aviary yaive neApplication. Izvo zvinosetsa ndezvekuti ndiri kunakidzwa neApplication application zvirinani kupfuura webhu vhezheni! Aviary ine toni yezvinhu, asi zvakare ine stickers iyo inogona kushandiswa kuwedzera callout (kana masharubu) kumufananidzo wako.
Photoshop Express ye iPhone
Kumwe kurudziro kubva kuna Nat uye imwe yandaifanira kunge ndakasanganisira… Photoshop Express. Iyo yehunyanzvi yekugadzirisa iyo iwe yaunogona kuwana ne Photoshop Express inogona kuwanikwa mune mamwe emamwe maturusi ari pamusoro, asi iko nyore kwekushandisa kunotyisa. Wedzera mafirita, mafuremu uye mhedzisiro kune zvakati wandei uye iwe unotova neakakura mafoto ekugadzirisa suite.
Iwe unayo chero mamwe maapplication eApple ayo akanaka kushandisa?
Tags: blenderkamera +neruzivogrid lensmufananidzomifananidzoiPhonepamusoromifananidzomufananidzosnpented
Mbudzi 17, 2012 na1: 56 PM
Aviary. Izvo zvese nezve meme mugadziri. Uye ine blur uye retouching maturusi asi chaicho chinotonhorera chinhu nezvazvo ndechekuti ine kubatana. Facebook, twitter, kudzima… panguva imwe chete. Anenge anotonhorera senge Instagram's
Zvino, vekutanga veavo vandirega ndibatanidze kuFacebook mapeji ad google pamwe neWINS!
Mbudzi 17, 2012 na2: 09 PM
Zvakanaka! Ini handina kana kuziva kuti vaive ne mobile app!
Nov 18, 2012 pa3: 10AM
hongu. zvakanaka. Paid app, asi kune iyo meme inogadzira uye yekuisa mameseji yaive yakakosha. Zvakare Photoshop Express uye InstaPicFrame izvo zvaive zvakanaka. Aviary yakave nekugovana kwakanyanya.
Zvita 29, 2012 na10: 40 PM
Tarisa uone yedu nyowani iPhoneography app, Hipsta Hipster Cam pa http://www.hipster-camera.com Isu tinofunga isu tine yakanaka inotonhorera twist pane yakajairwa iphone yekufotera app nekuve neusingagumi epakutanga mafirita ayo akagadzirwa pane iyo nhunzi.
Ini ndinofunga munyori akanganwa kuisa 'Zitrr Kamera'. Ini ndinofunga zvirinani kupfuura kamera + kana Instagram… zvakare, mamwe maapplication pano haana kunaka izvo: /
Mapurogiramu akanaka! Asi iwe unofanirwa zvakare kutarisa Auto Colourize Pro
Instafusion Yakakwira iPad Photo-Editing Mapurogiramu !!! Instafusion ndiyo Yakanakisa Photo Editing Mapurogiramu uye Anotyisa Mapurogiramu ekugadzirisa Mifananidzo pane iPhone !!!
chandinoda is instafusion app
Wakamboona Sweet Pix zvakadaro! Chaizvoizvo pfungwa inotonhorera.